Baro Dalkaaga Hooyo - Dhulka Soomaaliya - iftineducation.com
Dhanka koonfurtana marka aad u kacdidna waxaad geleysaa Sool iyo Hawd iyo dhulka loo yaqaan galgodon ama oogo . Markaad timaadid dhanka Baydhabo, waa dhul ka samaysan dhagaxa looyaqaan “Granite”. Xeebta u dhexaysa Kismaayo iyo Hobyo oo dhererkeedu yahay 1,000 km waa dhul bacaad ah, taas oo kutusinaysa bilicsamida dhulka soomaaliya marka aad kasoo eegtid dhanka badda. Dhulka kale ee hooseeya (dhul-hooseed) ee Soomaaliya waxaa kamid ah Dooxada Dharoor iyo Dooxada Nugaal oo kuyaal Waqooyi-Bari. Labaduba waa dhul waadi ah, waxayna biyaha ku daraan badweynta Hindiya. Dharoor waxay badda kaga darsantaa Xaafuun, Nugaalna waxay kaga darsantaa Eyl.